Instagram dia manafina ny tiany amin'ny sary any Etazonia | Androidsis
Tamin'ity taona ity, teo antenatenan'ny taona, dia nanao doka de Instagram dia hanafina ny isan'ny tiany amin'ny sary izay ampakarina eo amin'ny sehatra misy anao. Fepetra tadiavin'ny mpamorona ny tambajotra sosialy hifantoka amin'ny kalitaon'ny atiny, ankoatry ny fikatsahana ny hampihenana ny fiheverana amin'ny fitiavana sy ilay fahatsapana na filàna fankatoavana. Nanomboka tamin'izay dia nandalo fitsapana izy ireo.
Manomboka izao ny dingana fitsapana vaovao, any Etazonia, araka ny nambara. Ny Instagram dia manohy liana amin'ny manafina ny tiany amin'ny sary, na dia ireo izay antsoina hoe influencer aza dia miahiahy bebe kokoa amin'ny vokatra mety haterak'izany amin'ny maodelin'izy ireo.
Tao anatin'ireny volana ireny dia efa nisy ny Instagram manao fitsapana any amin'ny firenena maro miaraka amin'ity fiasa ity hanafenana ny tiana. Amin'ny ankamaroan'ny firenena nanandramana ity asa ity dia azo atao ny mahita ny fahalavoan'ny isan'ny tia amin'ny publication amin'ny tambajotra sosialy. Mampiseho fandalinana maromaro farafaharatsiny. Zavatra mampiakatra fisalasalana.
Iray amin'ireo vondrona izay aseho manohitra an'io fepetra io dia ny influencers. Ity vondron'olona ity dia nanao ny isan'ireo tiany sy mpanaraka ny maodelin'izy ireo, zavatra iray izay rahonana miaraka amin'ity fepetra ity, araka ny voalazan'izy ireo. Ka ezahin'izy ireo atao ny manakana azy tsy ho ofisialy.
Hatreto, ny Instagram dia nahavita ireo fitsapana ireo any amin'ny firenena toa an'i Japon, Aostralia na i United Kingdom. Na dia mbola tsy nilaza aza ny tambajotra sosialy raha hisy ny fepetra mamaritra na tsia. Noho io antony io dia maro no manantena fa hihemotra ny tambajotra sosialy, mba hitazomana ny isan'ny tiany amin'ny publication rehetra.
Tsy maintsy miandry isika vao hahita ny fomba fivoaran'ny fitsapana ireo tany Etazonia. Hatreto dia tsara ny Instagram momba an'io fepetra io, hany ka afa-tsy ny fanovana farany, dia nanohy ny tetik'izy ireo izy ireo hanala ny isan'ny tiany ao amin'ny publication. Ahoana ny hevitrao momba ity fepetra amin'ny tambajotra sosialy ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Instagram dia efa manafina ny tiana amin'ny famoahana any Etazonia